VaItai Dzamara Vosvika Makore Manomwe Vatsakatika
Mudzimai waVaItai Dzamara, Amai Sheffra Dzamara
Nhasi kwapera makore manomwe kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu VaItai Dzamara pasina anoziva kuti varipi. VaDzamara vakapambwa musi wa 9 Kurume 2015 pane imwe nzvimbo yekugera kuGlen View muHarare apo vakamanikidzwa kupinda mune imwe mota chena.
Mudzimai wavo Amai Sheffra Dzamara vakatombonyorawo tsamba kumutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kuti murume wavo atsvagwe asi kunyangwe vamnangagwa vakambovimbisa muna 2016 kumusangano weHuman Rights Commission vachiri mutevedzeri wenyika kuti vachaita kuti nyaya iyi iferefetwe hapana chabuda kusvika parizvino.
Vachitaura neStudio 7 nemusi weChitatu mudzimai waVaDzamara, Amai Sheffra Dzamara vari kurarama hupenyu hunorwadza vasingazivi kuti chii chakaitika kumurume wavo.
Amai Dzamara vanotiwo havana zvavari kubatsirwa nazvo nehurumende mukuedza kutsvaka kana kuziva zvakaitika kwavari kumurume wavo.
Shamwari yaVaDzamara, VaCharles Nyoni avo vavairatidzira navo kuAfrica Unity Square vachinyunyuta nehutongi hwavaimbove mutungamiriri wenyika, mushakabvu Robert Mugabe vati vari kushungurudzika zvakanyanya nekutsakatika kwaVaDzamara. VaNyoni vanoti vachinetarisiro yekuti VaDzamara vachawanikwa.
Vatiwo varikuzorangarira VaDzamara kuburikudza nemunamato uchaitirwa kumusha weGlenview manheru anhasi.
Mutauriri wesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaKumbirai Mafunda vati semagweta emhuri iyi vari kushushikana zvikuru nemakore ari kuramba achiwanda vasati vakwanisa kuziva kuna VaDzamara.
VaMafunda vatiwo vanoshungurudzika kuti hapana zviri kuratidza kuti hurumende ichiri kutsvaka vaDzamara.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner VaPaul Nyathi pamwe negurukota rinoona nezvemitemo VaZiyambi Ziyambi.
Asi vachitaura muna Ndira kumusangano mukuru wenyika dzepasi rese unotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu kana kuti Universal Periodic Review, VaZiyambi vakati hurumende iri kushushukana zvikuru uye iri kuedza nepese painogona kuferefeta nekutsvaka VaDzamara.
Vakatiwo hurumende yainge iri kuzadzikisa chiga chedare reHighCourt chekuti vape mhuri yekwaDzamara ruzivo rwezvinenge zvaitwa maringe nekutsvagwa kwavo mushure memavhiki maviri ega ega asi izvi zvanzi hazvisi zvechokwadi nemhuri pamwe nemagweta aVaDzamara.